Ohere Ohere Ntaneti na Nsonaazụ | Martech Zone
60% nke ndị America ga-ekpe ikpe ụlọ ọrụ gị dabere na ọnụnọ gị n'ịntanetị. Chee echiche banyere nke ahụ nwa oge. Ọ bụ ezie na ebe nrụọrụ weebụ gị na-arụ ọrụ dị mkpa na ọnụnọ gị n'ịntanetị, enwere ọtụtụ ihe na ya. Ndị mmadụ na-achọ akara gị ma na-ekpe ụlọ ọrụ gị ikpe dabere na ihe na-abịa na igwe nchọta.
Itinye ego na ntanetị PR na-enyere gị aka jikwaa ọnụnọ gị n'ịntanetị
Ihe m hụrụ n'anya gbasara ihe omuma a bụ na ọ na-enye ụfọdụ ntinye aka na ole mkpọtụ dị na ebe ndị ahịa na-enweghị ike ịnagide ya. Dị ka azụmahịa na ụlọ ọrụ na-achọ gị ika, online Usoro PR nwere ike inyere gị aka ịchọta ọtụtụ ihe n'ụzọ dị irè karị. Anyị hụrụ n'anya na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ PR anyị, Dittoe PR… ha nwere ike ijide n'aka na ndị ahịa anyị hụrụ ebe ndị na-ege ha ntị na-arụsi ọrụ ike.
Infographic site na PRMarketing.com.
Tags: online prmmekọrịta ọha na eze n'ịntanetịpr infographicpr oherepr nsonaazụntinye
10zọ iri iji mụbaa ahịa na 2012
Mgbawa Ọdịnaya Ọdịnaya